ကြိုက်ရာယူပါ နှစ်ကျပ်ခွဲ rental | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကြိုက်ရာယူပါ နှစ်ကျပ်ခွဲ rental
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 9, 2013 in Community & Society, Relationships & Family, World News |5comments
တရုတ်နှစ်ကူး နီးလာပြီမို့ ရွာထဲမလဲ အမျိုးသားဂေါင်းများ ငှားရန်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်ကိုတော့ ကြေးမုံဂျီး ဦးထားပြီးပြီမို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ သူက ဖူးလ်ဆားဗစ်ပေး ငှားထားတာပါ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ပိုင်းပြသနာ မပေါ်ရလေအောင် ဓာတ်ပုံ၊ မူဗွီ၊ အွန်လိုင်း၊ အော့ဖ်လိုင်း ၃၆၀ံ မူပိုင်ခွင့်ပါ ဝယ်သွားပါတယ်။ :eee:
ယောက်ျားလေး ချစ်သူ ငှာရမ်းခြင်း တရုတ်ပြည်တဝှမ်းမှာ ပေါ်ပင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ တယ်လီဂရပ်ယူကေ သတင်းစာအဆိုအရ နှစ်သစ်ကူးမတိုင်ခင် အဲလိုငှားရမ်းခံရဖို့ TAoBao အွန်လိုင်းဈေးဝယ်တဲ့ ဝက်ဗ်ဆိုက်မှာ အမျိုးဂေါင်းသား ၃၀၀ခန့် စာရင်းပေးထား ပါသတဲ့။ ဈေးကတော့ တနေ့ ယူအက်စ်၄၈ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့အနမ်းရယ်၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းရယ်၊ လူဂျီးသူမတွေနဲ့ အရက်အတူ သောက်ပေးပါအုံး ဆိုရင်တော့ အပိုကြေး ထပ်ဆောင်းရပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ မိန်းခလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုဖို့၊ မိသားစုဘဝတခု စတင်ဖို့ ဖိအားတွေ သိပ်များနေပေမဲ့ အမျိုးသားဦးရေ ပိုများနေခြင်းက သူတို့ကို အလုပ်အကိုင် ရည်မှန်းချက် မပြည့်စုံခင် တကိုယ်တည်းဘဝနဲ့ ကြာကြာနေဖို့ (ပဲများကုန်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါမယ်၊ စကားချပ်) ခွင့်ပြုပေးနေ သလိုပါပဲ။ နွေဦးရာသီပွဲတော် အိမ်အပြန်ခရီးဟာ ရွေးကျန်အမျိုးသမီးများလို့ သမုတ်ခံနေတဲ့ ကြင်ဖော်မဲ့ အသက်၂၇နှစ်အထက် အပျိုဂျီး များအတွက်တော့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာပါ။
သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူ ကြေးမုံဂျီး၏ ကြောင်ချစ်သူ
တရုတ်လူမှု သိပ္ပံပညာရှင်များက လာမည့် သန်းကောင်စာရင်း ကောက်ယူမှုမှာ ကျားမဦးရေ အချိုးအစားဟာ မိန်းခလေး ၁၀၀ရှိရင် ယောက်ျားလေး ၁၂၂ဦး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ ပုံမှန်အနေအထားမှာ မိန်းခလေး ၁၀၀ရှိတိုင်း ယော်ကျားလေး ၁၀၅-၁၀၆ဦး မွေးဖွားရပါတယ်။ သူတို့ခန်းမှန်းချက်အရ ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ အပိုဖြစ် ဘက်မဲ့နေတဲ့ တရုတ်အမျိုးသား ၃၅သန်း ရှိပါလိမ့်မယ်။
တရုတ်ပြည်ဟာ ဒီအတိုင်းဆို ထင်ကြသလို ငြိမ်သက်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောစရာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားတဲ့ ပညာရှင် တဦးက အကြံပြုထားပါတယ်။ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ အဓိကရုဏ်း အရေအတွက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ် အတွင်း ဆပြန်တိုးနီးပါး ပုံစံနဲ့ ပိုလာခဲ့ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုနှုန်း အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက် ရာဇဝတ်မှုနှုန်း မြင့်တက်နေခြင်းဟာ လူမှုရေး မငြိမ်သက်မှုရဲ့ အစသင်္ကေတဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ယောက်ျားလေး ဦးရေ ၁၅% နီးပါးသည် သက်တူရွယ်တူ မိန်းခလေး ရှာမရဖြစ်ဖို့ များနေပါပြီ။
China rent-a-boyfriend services big for single women this New Year Published: Feb. 8, 2013 at 12:01 PM Rentingaboyfriend isanew fad sweeping across China. The Telegraph UK reported that 300 men are listed “for rent” on the shopping site TaoBao ahead of the annual New Year celebration. The price is about $48aday. An “appropriate kiss,” shopping, and drinking with “old people” can all be added on for extra fees. In Chinese society, there isalot of pressure on women to marry and startafamily, but the surplus of men is actually letting them stay single longer while they improve their work prospects. Going home for the spring festival can be frustrating for single women over 27, often called “leftover women.” Social scientists in China say the upcoming census results could revealagender ratio of 122 boys born for every 100 girls. Under natural conditions, there are typically 105-106 boys for every 100 girls. Sociologists predict that by 2020 there will be an “extra” 35 million Chinese men for whom there is no equivalent female partner. “I would suggest that China is not as ‘calm’ as one might imagine,” says researcher Valerie Hudson, co-author of the book “Bare Branches.” “The number of protests and riots has increased in an almost exponential form over the last 10 years. Crime rates, especially violent crime rates, are rising. These are the harbingers of the social unrest which we believe will result from about 15 percent of the young adult male population being surplus to the number of women in that age cohort.” Read more: http://www.upi.com/blog/2013/02/08/China-rent-a-boyfriend-services-big-for-New-Year/8411360336962/#ixzz2KMkfXKvz
လှယဉ်ကျေးမယ်ကိုယ်လုံး နဲ့ ရုပ်ကလေးမဆိုးရင် မောင်ပေက FOCပေးမှာ
လိပ်ခါးဖားဖင် မယ်ကုဝဏ်ဆိုရင်တော့ ဆရာကြောင့်ဆီသွား
ဦးမာဃကတော့ အဲဒါတွေ စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူး
နတ်သမီး တစ်ဖက်တစ်ထောင်နဲ့ ချာချာလည်နေလို့
လာစပ်သမျှကို အားနာနာနဲ့ ထိုင် ငြင်းနေရတယ်ကွယ်
တလုတ်ပြည် သွားမလို့ စဉ်းစားနေတာ ..
ခုတော့ မသွားတော့ဘူး …
ကြောင်ချစ်သူဆိုတဲ့ ပုံလေးကို သဘောကျလှပါ၏။